Nahoana no BROAD Rubber foam?
BORAD dia mifikitra amin'ny foto-kevitra momba ny kalitao avo lenta sy ny vidiny ambany, ny fitaovana sy ny teknolojia avo lenta ary ny serivisy haingana. Izy io dia miompana indrindra amin'ny famokarana akora fingotra vita amin'ny fingotra sy fitaovana fingotra feo. Ny fampifangaroana ny R&D, ny fanavaozana, ny teknolojia matihanina ary ny fitaovana mandroso, dia afaka mitarika ny mpifaninana amin'ny indostria isika ary miara-mamolavola ny vokatra tsara indrindra amin'ny mpanjifa.
Ny insulation foam BROAD dia manana tombony miavaka izay mahatonga azy io ho safidy ho an'ny matihanina maro.
1.Low thermal conductivity: Fingotra-plastika tontonana dia karazana fitaovana avo lenta insulation mafana. Ny fingotra akorany dia manana conductivity mafana ambany. Izy io dia fitaovana tena tsara ho an'ny insulation mangatsiaka sy insulation mafana.
2. Ny fahombiazan'ny afo tsara, ny fitaovana insulation avo lenta dia tsy mitaky fahaiza-manao tsara amin'ny fahombiazan'ny insulation mafana, fa koa tsy maintsy mahatratra vokatra tsy mirehitra na lelafo. Ny fitaovana fingotra vita amin'ny hazo fingotra dia nohamarinin'ny fenitra nasionaly ary an'ny fitaovana mahatanty lelafo B1.
3. Ny fantsona fingotra foam dia tantera-drano sy hamandoana-porofo. Kely ny fidiran'ny rano, noho ny rafitra mihidy amin'ny sodina insulation plastika, ny molekiolan'ny rano ivelany dia sarotra ny miditra ao anaty fitaovana.
4. Long service life, fingotra foam fitaovana manana toetrandro tsara fanoherana, anti-fahanterana, mangatsiaka sy hafanana fanoherana, ary koa manana anti-ultraviolet, Ozone-mahatohitra, dimy amby roa-polo taona ny tsy fahanterana, tsy misy deformation, fikojakojana ny fanompoana. fiainana sy toetra hafa. .
5. Ny fitaovana fingotra sodina dia sariaka amin'ny tontolo iainana, Fahombiazana tsara amin'ny tontolo iainana, tsy misy akora manimba ao amin'ny atmosfera, tsy hisy loto mandritra ny fametrahana.
6. Ny fitaovana fingotra foam dia malefaka ary manana henjana tsara. Noho izany dia mety amin'ny fanorenana. Izy io dia azo apetraka mora foana ho an'ny fantsona fantsona sy fitaovana tsy ara-dalàna toy ny zoro sy tees. Ankoatra izany, ny endriky ny fantsona fingotra sy plastika dia fisaka sy tsara tarehy. Ny fanovana dia mampihena ny fotoana fanorenana ary mamonjy ny fandaniana.
SOSO-KEVITRA AMIN'NY INSULATION FOAM RUBBER
• Avo avo mahatohitra afo
• Hafanana taratra sy taratra sakana
• Ataovy milamina tsara ny hafanan'ny efitrano
• Mitsitsy angovo
• Fametrahana mora
• Mora tapaka
• Mahatohitra ny rano sy ny etona
• mahatohitra ny harafesina
• Mety amin'ny fampiasana amin'ny gorodona, tafo ary rindrina
• Ny sanda R dia afaka 10 mihoatra noho ny hatevin'ny 15 mm